Wararka - Maxay yihiin alaabteennu?
Tan iyo aasaaskeedii, Shirkaddayadu waxay aasaastay qaab-dhismeed wax soo saar oo dhammaystiran, in ka badan 10 taxane ah iyo 100 moodal oo matoorro bilaabaya .Shirkadeennu waxay awood u leedahay wax soo saar sanadle ah oo ah 500000 nooc oo bilow ah oo lagu soo saaray khadka wax soo saarka heer qaran oo leh teknoolojiyad iyo qalab dhameystiran . Alaabtayada ugu muhiimsan waxaa ka mid ah taxanaha BOSCH, Delco 39MT iyo 38MT series, Mitsubishi series, Bosch series, Prestolite series, Hitachi series iyo wixii la mid ah. Waxyaabahayagu waxay ku habboon yihiin noocyo badan oo matooro ah iyo Baabuurro waaweyn, sida matoorada Cummins, matoorada Deutz, Freightliner Trucks, DAF Turcks, Scania Trucks, Daewoo Trucks, Iveco Trucks iwm, waxaan dhoofineynaa waddan badan, Russia, Spain, Brazil, Iran, Algeria Kamboodiya iyo wixii la mid ah, Tayada macaamiisha sifiican ayey u heleen.
Sida aan wada ogsoonahay, bilowga mishiinku wuxuu ubaahanyahay taageerada quwadda dibada ah, iyo bilowga gaariga ayaa ciyaaraya doorkaan. Guud ahaan, bilowgu wuxuu adeegsadaa saddex qaybood si loo xaqiijiyo geedi socodka bilowga oo dhan. Mashiinka taxanaha DC wuxuu soo bandhigayaa hadda batteriga wuxuuna ka dhigayaa qalabka gawaarida bilowga inuu soo saaro dhaqdhaqaaq farsamo; habka gudbinta wuxuu kudhajiyaa qalabka gawaarida gawaarida giraanta flywheel, oo si otomaatig ah ayuu u jari karaa ka dib marka mashiinka la bilaabo; wareegga biloowga waxaa shidaa oo damiyaa elektromagnetic biire si loo xakameeyo. Iyaga dhexdooda, mootadu waa qaybta ugu weyn ee ku jirta bilowga. Mabda 'u shaqeynteeda ayaa ah geedi socodka beddelka tamarta ee ku saleysan sharciga Ampere ee aan kula soo xiriireyno fiisigiska dugsiga sare ee yar, taas oo ah, saameynta koronto-dhaliye firfircoon ee aagga birlabta. Mootada waxaa ka mid ah armature lagama maarmaanka ah, commutator, birlabta birlabta, buraashka, qaadista iyo hoyga iyo waxyaabo kale. Mashiinka waa in lagu rogaa xoog dibada ah inta uusan ku shaqeynin awoodiisa. Hawsha mishiinku uga gudbayo xaalad kacsan oo awood u leh inuu kaligiis ku socdo awood dibada ah waxaa loo yaqaan 'engine Start'. Hababka bilawga ee loo isticmaalo matoorada waxaa ka mid ah bilawga gacanta, bilowga mashiinka shidaalka iyo bilowga korantada. Bilowga Buuggu wuxuu korsadaa xadhigga ama gacan ku haynta gacanta, taas oo ah mid fudud laakiin aan ku habboonayn isla markaana xoog badan. Waxay ku habboon tahay oo keliya qaar ka mid ah matoorada awoodda yar, waxaana loo hayaa oo keliya habka keydinta baabuurta qaarkood; bilawga mashiinka shidaalka shidaalka ah waxaa badanaa loo isticmaalaa matoorada awooda sare leh. On matoorada naaftada; habka bilawga korontadu waa fududahay in la shaqeeyo, dhakhso loo bilaabo, wuxuu awood u leeyahay inuu ku celiyo bilowga, waana laga xakamayn karaa meel fog, sidaa darteed waxaa si weyn u isticmaala gawaarida casriga ah.
Hadafkeenu waa "Bixi alaab leh tayo lagu kalsoon yahay iyo qiimo macquul ah". Waxaan ku soo dhaweyneynaa macaamiisha gees kasta oo adduunka ah inay nala soo xiriiraan xiriirada ganacsi ee mustaqbalka iyo sidii loo gaari lahaa guul wadajir ah!
Waxaan ku adkeysaneynay nuxurka ganacsiga “Tayada Koowaad, Ixtiraamida Qandaraasyada iyo U Istaagida Sumcadda, siinta macaamiisha wax soo saar iyo adeeg qanciya. ”Asxaabta gudaha iyo dibaddaba si diiran ayaa loo soo dhoweynayaa si ay xiriir ganacsi weligeed ah noola yeeshaan.